Dibad bax lagaga soo horjeedo xariga nabadoon Yaasiin Cabdi laguna dalbanayo in la soo daayo oo Gaalkacyo ka dhacay, (Sawirro) – Radio Daljir
Diseembar 24, 2012 2:10 b 0
Gaalkacyo, 24, Dec- Barqanimaddii maanta dibad baxyo lagaga soo horjeedo xariga Nabadoon Yaasiin Cabdi Samad iyo wax garad kale laguna dalbanayo in la soo sii daayo ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Isu-soo baxu xooggiisu waxaa uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta taliska qaybta booliska gobolka Mudug, dadka isku soo baxay oo u badnaa dhalin-yaro iyo haween ardayna ay ku jiraan ayaa watay qaarkood boorar ay ku qoran yihiin ereyo ka dhan ah xariga Nabadoonka iyo sawirka Nabadoon Yaasiin.
Dadka oo qaarkood ku qaylinayay ereyo ashtako iyo codsi isugu jira ayaa iyagoo adeegsanayay cod baahiyayaal waxay m/weynaha PL Dr, C/raxmaan Faroole ay u dirayeen codsi ku aadan in xoriyadooda la siiyo waxgaradka ku xiran Garoowe.
Taayaro ayaa lagu gubay meelo ka mid ah laamiga, bilowgii dibad baxan ayay ciidanka booliska rasaas cirka u rideen dadkii isku soo baxay waxaana iyana rasaas cirka u gamay dhalin-yaro caraysan.
Qaban qaabiyayaasha bannaan baxa maanta ayaa warbaahinta u sheegay in maalinta berri ah loo ballan san yahay dibad bax kan baaxad iyo abaabul weyn.
Saraakiisha maamulka iyo laamaha ammaanka oo aynu la xiriirnau ayay inoo suura gali wayday inaynu helno, balse mar walba waynu isku dayi doonaa inaynu idiin soo gudbo waxa ay ka yiraahdaan dibad baxan iyo kuwa la qorshaynayo.